Arthur oo ugu dambeyn aqbalay Juventus, iyo waqtiga uu u duulayo Turin oo la shaaciyay – Gool FM
(Barcelona) 26 Juun 2020. Kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa ugu dambeyn ku guuleysatay inay Arthur Melo ku qanciyaan kooxdooda, waxaana uu la gaaray heshiiska shaqsiga ah, xilli Barcelona ay horraan heshiis la gaartay dhiggeeda.
Dhanka kale Barca iyo Pjanic ayaa goor hore heshiis meel wada dhigtay, waxaana heshiiska is weedaarsiga ah uu u xayirnaa aqbalitaanka laacibka reer Brazil.
Kooxaha kala dhisan dalalka Spain iyo Italy ayaa ku heshiiyay saxiixyada labada laacib, halka xiddigaha khadka dhexe ka ciyaara ay aqbaleen dhankooda inay kooxahan u kala wareegaan.
Bianconeri ayaa Arthur ku qancisay heshiis shan sano ah, oo ay sanad ciyaareedkii mushahar ahaan u siin doonaan shan milyan oo euro iyo gunnooyin, halka Barca ay laacibka reer Bosnia kula heshiiyeen mushahar 7.5 milyan oo euro ah, isagoo qalinka ku duugi doona qandaraas shan sano ah.
Majaladda RAC1 ayaa laga soo xiganayaa in Blaugrana ay xiddiga reer Brazil u fasaxday inuu u dhaqaaqo waqooyiga dalka Talyaaniga toddobaadka soo aaddan si uu ula dhammeysto xilli ciyaareedkan Juve.
23-jirkan ayaa labada maalin ee soo aaddan u safri doona magaalada Turin si uu halkaas ugu maro tijaabada caafimaadka, isla markaasna uu u dhammeystiro ku biirista The Old Lady.
Balse Miralem Pjanic ayaa la sii joogi doono Juve illaa iyo inta uu ka dhammaanayo fasal ciyaareedkan iyo tartanka UEFA Champions League.